Wararka - Meelaha hurdo eeyaha
Milkiile kasta oo rabaayad ah wuxuu rabaa inuu wax badan ka ogaado eeyahooda, ee ku saabsan booska eygooda uu jecel yahay. Meelaha eydu ku seexdaan, iyo waqtiga ay ku qaataan hurdada waxay muujin kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan sida ay dareemayaan.
Waa kuwan qaar ka mid ah jagooyinka hurdada ee caadiga ah iyo waxa laga yaabo inay ka dhigan yihiin.
Haddii aad badanaa aragto eygaaga oo seexanaya booskan hurdada. Taas macnaheedu waxa weeye inay dareemayaan inay aad ugu raaxeysanayaan oo ay ku kalsoon yihiin deegaanadooda Eeyahaas badanaa waa kuwo faraxsan, oo aan taxaddar lahayn, oo aad u daacad ah. Mawqifkani wuxuu sidoo kale uga tagayaa addimmadooda inay si xor ah u dhaqaaqaan inta lagu jiro hurdada, markaa waxaad arki kartaa kala-bax badan iyo lugo lugta ah eey jiifa dhinacooda.
Booskan hurdo ayaa guud ahaan ah kuwa ugu badan. Xilliga dayrta iyo bilaha jiilaalka ee cimiladu qabowdo, eeyaha ayaa seexda qaabkan, si ay uga caawiyaan ilaalinta diirimaadka.
Isuusoo Baxay Caloosha
Eeyaha ku seexda meeshan, gacmaha iyo lugaha oo fidsan iyo caloosha oo hoos u dhaca, ayaa inta badan calaamad u ah dabeecad wanaagsan.Waxay had iyo jeer ka buuxaan tamar, fudeyd badan oo dhiirigelin leh, oo faraxsan. Waa booska xulashada ee ardayda hurdo laanta inta lagu jiro ciyaarta oo kaliya doonaya inay ku fooraraan halka ay taagan yihiin.
Dhanka Dambe, Cagaf Cirka Hawada
La seexashada caloosha oo banaanka timid waxay ka caawisaa eey qaboojinta sida kuleylka kubbadda ay u ilaalin karaan kuleylka. Baahinta aagagani waa hab fiican oo looga adkaado kuleylka maxaa yeelay dhogorta ayaa khafiifsan oo ku wareegsan caloosha ciribkuna wuxuu hayaa qanjirrada dhididka.
Sidoo kale waa mowqif tilmaamaya in eeygu aad u deggan yahay, taasoo ka dhigeysa goobahooda ugu nugul nugul oo ay adag tahay in si deg deg ah lugahooda loogu fuulo. Booskan hurdo waa wax caadi ah bilaha xagaaga.
Eeyahaas doorbidaya inay la seexdaan milkiilayaashooda, had iyo jeer way ka badbaado badan tahay in la nadiifiyo, la shanlo, la maydho oo la tallaalo.